Wasiirka Waxbarashada Puntland oo gaarey magaalada Boosaaso. – Radio Daljir
Diseembar 6, 2012 12:53 g 0
Boosaaso, Dec 6, Wasiiirka Waxbarashadda Puntland Cabdi Faarax Siciid ?Juxa’ iyo wafti katirsan wasaaradda Waxbarashadda oo kormeero Waxbarasho kusoo maray gobolada , Nugaal, Karkaar , iyo Sanaag iyo maanta gaarey magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari .
Waftiga waxa ay subixii hore ee saakay ka amba baxeen degmada Badhan ee gobolka Sanaag oo ay labadii maalmood ee lasoo dhaafay ku sugnaayeen, Iyagoo kormeero waxbarasho ku sameeyeen dhammaan dugsiyada kuyaala gobolada Haylaan iyo Badhan ? oo ay kamid yihiin, Dhahar, Xingolol, Ceelbuh, Jiingada, Badhan iyo Hadaaftimo.
Waftigu ?waxa ay saddexda ?maalmood ee soo socota ku sugnaandoonaan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, Waxayna kormeer ku sameenayaan dugsiyada waxbarasho iyo Jaamacaddaha kuyaala magaalada Boosaaso, Iyagoo kadibna dib ugu laaban doona ?Magaalada Garowe ee xarunta Puntland.
Wasiirka Waxbarashada Puntland Cabdi Faarax Siciid ?Juxa’ oo Radio Daljir kula hadalayay deegaanada ?ay kormeerka kusoo mareen ayaa wuxuu sheegay in kormeerkaan uu yahay mid ?loogu kuur galayo xaalada Waxbarashada ee gobolada Puntland haatan ay marayso, Iyadoona uu sheegay in qiimayn lagu sameynayo baahiyaha dhabta ahi ee haysta dugsiyadda ay gacanta ku hayso Wasaaradda Waxbarashada Dawladda Puntland.
Wasiirka Waxbarashada Puntland Juxa ayaa sheegay kormeerka kadib in wasaaaradda waxbarasha balan qaaday in ay dugsiyo waxbarasho ka hirgalinayso qaar kamid ah deeganaada ay kormeerka lagu sameeyay,Waxaana sidoo kale uu sheegay in dayactir ?lagu sameynayo kuwa horey ujiray.
C/ Weli M. Sheikh
Siyaasiga Cabdilaahi Siciid Samatar oo lagu soo dhoweeyey magaalada Boosaaso, kana hadlay arimo kusaabsan doorashooyinka Puntland .